I-KLM iphinda iqale ukusebenza kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast nge-3 ka-Agasti
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-KLM iphinda iqale ukusebenza kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast nge-3 ka-Agasti
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziQhelekileyo zaseIreland • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Oko kwaqhambuka i Covid-19 ingxaki, KLM ibilungisa inethiwekhi kunye neshedyuli yokubhabha ngokuhambelana nezithintelo zohambo kunye nemfuno. Iinqwelomoya ze-KLM ezivela eBelfast City zarhoxiswa ukuphela kuka-Matshi xa uhambo lomoya lwafika lwema ngxi, nge-5% kuphela yenethiwekhi yenethiwekhi yomhlaba ecwangciselwe ukusebenza ngo-Epreli nango-Meyi.
Ukususela kwi3rd Nge-Agasti, i-KLM iya kuphinda iqale ukusebenza phakathi kweBelfast City Airport kunye neAmsterdam Schiphol Airport isebenzisa inqwelo moya ye-Embraer 175, ethwele abakhweli abangama-88. Ngalo lonke ixesha lasehlotyeni, abakhweli baya kuba nethuba lokunxibelelana neendawo ezingaphezulu kwe-100 zaseYurophu kunye nezamazwe aphesheya ngeAmsterdam, zinika unxibelelwano kwihlabathi liphela ukuya naseBelfast embindini wedolophu. Iinqwelomoya zithengisiwe ngoku.
UBenedicte Duval, Umphathi Jikelele we-UK kunye ne-Ireland uthe,
“U-2020 ngunyaka obalulekileyo we-KLM kunye namaqabane ethu kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast njengoko sibhiyozela iminyaka emi-5 yokusebenza. Ukuqala kwethu ukuphehlelela indlela ebuyela ngoMeyi 2015, kuyasivuyisa ukubanethuba lokwamkela abathengi bethu baseNyakatho yeIreland kwakhona, ngaphandle kwemiceli mngeni yakutshanje kushishino lwethu. Ukuqala kwakhona kwenkonzo yemihla ngemihla phakathi kweBelfast City neAmsterdam bubungqina bokuzinikela kwethu ixesha elide kulo mmandla.
“Njengokuba kuvulwa imida kwaye izithintelo zohambo ziqala ukuthamba, ukhuseleko luyimfuneko ye-KLM njengoko siqala ngcembe ukuhamba kwaye njengoko sonke siziqhelanisa nale meko intsha, ndinokuqinisekisa ukuba bonke abasebenzi be-KLM, emhlabeni nasemanzini, sizibophelele ekuqinisekiseni abakhweli bethu awona manqanaba aphezulu empilo nokhuseleko. ”
"I-KLM iphinda iqale inkonzo yayo ukusuka eBelfast City ngo-Agasti ziindaba ezilungileyo ngokwenene. Lo nyaka ubhiyozela isikhumbuzo sesihlanu sentsebenziswano kunye ne-KLM kunye nendlela yaseAmsterdam esebenze kakuhle kakhulu.
"Le ndlela inika ukhetho olongezelelekileyo kubahambi bethu abanokuba bajonge ukucwangcisa ikhefu elifutshane eNetherlands okanye ngokwenene kolunye unxibelelwano lwe-KLM."
I-KLM iyakha ngokuthe ngcembe uthungelwano lwehlabathi, ukukhetha ukuqala kwakhona kwiindawo ezininzi kangangoko kunokwenzeka kwaye kwandise amaza namandla. NgoJulayi, i-KLM ilindele ukuba isebenzise i-80% yenani eliqhelekileyo leendawo zaseYurophu kunye ne-75% yeendawo zokungena phakathi kwamazwe. Oku kuyonyuka ukuya kwi-95% kunye ne-80% ngokwahlukeneyo ngo-Agasti. Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba okwangoku, iipesenti ezingama-50 zeenqwelo moya ezihamba kumazwe angaphandle zizinto kuphela. Xa izithintelo zokuhamba zamanye amazwe zikhululekile, i-KLM iya kuqala ukuthwala abakhweli kwezi ndawo.
Oko kwaqala ukuqhambuka kweCovid-19, i-KLM kunye neBelfast City Airport ziye zazisa uluhlu lwamanyathelo ezempilo kunye nokhuseleko ukukhusela abathengi kunye nabasebenzi, bobabini ebhodini nakwizikhululo zeenqwelo moya.
Isikhululo senqwelomoya saseBelfast siqhubeka nokulandela yonke imigaqo efanelekileyo yezikhululo zeenqwelo moya ngokunxulumene neCovid-19. Amanyathelo athathiweyo ukwenza ukuba abakhweli babekho kumgama wentlalo kwisiphelo kwaye iiyunithi zokucoca izandla ziyafumaneka kulo lonke uhambo lwabakhweli. Abasebenzi kwisikhululo seenqwelomoya banxibe i-PPE efanelekileyo kwaye abakhweli bayacelwa ukuba banxibe ubuso ngelixesha kwisiphelo. Isikhululo seenqwelomoya sithumele abasebenzi abongezelelweyo abazinikele ekucocweni kwetheminali.
Umgaqo-nkqubo we-KLM usekwe kwizikhokelo zamazwe aphesheya (i-WHO, IATA), kwaye ibandakanya:
The Ukunxiba iimaski ezinyanzelekileyo kubo bonke abakhweli, abasebenzi beenqwelo moya kunye neearhente zokuphatha isikhululo seenqwelomoya ngokunxibelelana nabathengi
The ukuguqulwa kwamajelo abathengi emhlabeni ngokumiliselwa kokuhamba emzimbeni kuhambo lwabathengi kwisikhululo seenqwelomoya kunye nokufakwa kwezikrini zokukhusela eziselubala kwizikhululo zeenqwelo moya xa kunokwenzeka
Ukuphunyezwa kwe ukuhamba emzimbeni kwisikhululo seenqwelomoya nakwibhodi apho kunokwenzeka khona. Izinto zomthwalo ophantsi zangoku zenza ukuba kube lula ukwahlula abathengi kwiimeko ezininzi. Kwimeko apho oku kungenakwenzeka, iimaski zobuso ezinyanzelekileyo ziqinisekisa ukhuseleko olufanelekileyo lwezempilo.
The ukomeleza iinkqubo zokucoca iinqwelomoya mihla le, kunye nokubulala iintsholongwane kuyo yonke imiphezulu ekunxibelelaneni nabathengi njengendawo yokubamba iingalo, iitafile kunye nezikrini
Ukuhlengahlengisa inkonzo yenqwelomoya ukunciphisa umda kunxibelelwano phakathi kwabathengi kunye namalungu abasebenzi. Kwiinqwelomoya ezifutshane ngaphakathi eYurophu, iinkonzo zokutya neziselo zinqunyanyisiwe. Kwiinqwelo-moya ezinde, iinkonzo zekhabhathi zilinganiselwe kwaye kukhethwa ukunikezelwa kwiimveliso ezisongelweyo.
Ukuhlolwa kwabahambi ziqhutywa ngenqwelomoya kwiindawo ezithile ngokuhambelana nesikhokelo sikarhulumente. Ukuhamba ngenqwelomoya ukusuka eAmsterdam ukuya eCanada, eSingapore naseMzantsi Korea, abakhweli bayabonwa ngokwasemzimbeni. Abahambi abakhwela kwiindawo ezimbini zokugqibela bafumana itshekhi eyongezelelweyo yobushushu.